26 Apr, 2019 - 00:04	 2019-04-25T08:52:02+00:00 2019-04-26T00:02:31+00:00 0 Views
NDIRI murume ane makore 45, ndiri pamushonga uye ndinodawo mukadzi ane makore 35 zvichikwira. Ngaave anoda kutanga hupenyu hutsva neni, anoshanda kana asingashande totangira ipapo. Asi, kwete vanoda mari. Nhamba yangu 0777 529 099.
Makadii? Ndanzwa nekunyorera ndichisangana nematsotsi. Ndodawo mukadzi ave kuda zvemba ane makore 28 – 34. Ndoita mabasa emaWoko, nhare yangu 0772 506 330.
Ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 – 19 ari pachokwadi kuda zvemba asiri pamushonga. Zvizhinji tozotaura, andifarira ngaandibate pa0772 213 345.
Makadii? Ndiri murume ane makore 40, HIV+ uye ndinotsvaka shamwarikadzi isina mwana. Ndinobatika pa0775 316 821.
Ndiri mukomana ane makore 30, ndinoshanda uye ndinotsvagawo musikana ane makore 19 – 30 akanaka. Ngaave anotya Mwari ave kuda zveimba uye asina chirwere. Nhare yangu 0783 891 742.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri musikana ane makore 25 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo murume ane rudo asingashushe, anofara. Handina mwana, andida ngaandibate pa0778 115 466.
Makadini? Ndiri murume ane makore 50 nevana vatatu. Ndinotsvaga shamwarikadzi, andifarira ngaandibate pa0716 633 038.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 3, ndinotsvagawo murume asiri pamushonga ane makore 40 kusvika 45. Anoshanda uye anodawo zvemba. Ngaave nevana vakewo 2 kana 3, anofarira zvekurima. Andifarira anondibata pa0777 908 455.
Makadini? Ndiri murume ane makore 41, HIV positive uye ndodawo mukadzi. Andidawo zvizhinji totaura pa0782 716 740.
Ndiri murume ane makore 43. Ndinotsvagawo mudzimai akarongeka anoda zvemusha ane makore ari pasi pe35. Ngaave ari positive uye mupfupi. Nhare yangu 0716 882 333.
Ndiri murume ane makore 59 akasiyana nemukadzi. Ndinotsvaga mudzimai akavimbika ane makore 25 kusvika 60. Nhamba yangu 0773 012 273.
Makadii? Ndotsvagawo murume anoda zvemba anoshanda uye asiri pamushonga. Ngaave ane mwana 1 anopinda mapentacost. Ndibatei pa0771 439 148.
Makadini veTishamwaridzane? Shambadzo dzangu hadzisi kubuda. Ndiri murume ane makore 46 nevana 2, ndichigara muHarare. Ndinotsvagawo mukadzi akanaka chiso nechimiro ane vana vari pasi pevaviri uye ane makore ari pasi pe35. Handidi zvangu vanoshanda mumba, ini ndinoita mabasa emaoko. Ndinoda wemuHarare. Andifarira ngaandibate pa0774 068 844.
Makadii? Ndotsvakawo mudzimai wekuroora ane makore 28 – 35, ini ndine 46. Asiri pamushonga ngaandibate pa0782 980 649.
Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 ?usvika 28. Ngaave akavimbika anotya Mwari. Nhare yangu 0776 531 808.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 29 ekuberekwa nemwana wangu mumwe chete. Ndiri kutsvagawo mukadzi akazvipira uye ane rudo asi matsotsi kwete. Ngaave ane makore 20 kusvika 28 anotya Mwari uye ane mwana wake asi vakadzi vevanhu kwete. Nhare yangu 0775 711 703.
Ndiri murume ane makore 35 nemwana 1. Ndinotsvaga musikana kana mukadzi ane makore 20 kusvika 25. Ndinoda akanaka kumeso, mutete akareba zviri pakati nepakati uye chero ane mwana 1. Zvakawanda tozotaura. Nhare yangu 0717 222 244.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 39, handina mwana uye ndiri pamushonga. Ndinotsvaga shamwari iri serious kwete anoda zvekutamba. Ndinoda ane makore 40 – 45. Andibate pa0715 891 087.
Ndinodawo musikana akanaka ane makore 18 kusvika 20. Ndine makore 28 uye ndinoshanda. Ndakarongeka, andida ngaandibate pa0712 043 876.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndotsvagawo mukadzi ane makore 24 kusvika 36 ane mwana mumwe kana vaviri. Andifarira ngaandibate pa0716 156 023.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore 21 zvichidzika asina mwana. Ndoshanda ndiri kunze kweHarare, ndibatei pa0778 649 726.
Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvakawo musikana ane makore 21 zvichidzika. Handirwari, ndifonerei pa0774 286 305.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35, ndotsvagawo mukadzi akanaka ane makore 18 – 25 ari serious. Ndiri muHarare, nhamba yangu 0774 300 717.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 23 ekuberekwa, ndinotsvagawo musikana wekuwadzana naye asiri pamushonga uye anogara muHarare. Ndinobatika pa0773 998 955.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, ndodawo mudzimai ane makore 18 – 21 asiri pamushonga. Anoda ngaandibate pa0777 017 076.
Ndiri murume ane makore 46 ndoda mukadzi ane makore 30 – 40. Vana 2, chero asina mwana. Nhamba dzangu 0777 417 738.
Makadiiko veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 38. Ndotsvagawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 40 zvichikwira. Ndine vana vaviri, nhare yangu 0772 724 188.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ari kutsvaga murume akavimbika asina mukadzi. Ndine makore 29 ekuberekwa, ndinoda ane makore 30 kusvika 38. Nhare yangu 0775 631 272.
Makadini henyu? Ndiri kutsvagawo murume ane makore 25 zvichidzika. Ndine makore 21 nemwana 1, ndoda ari negative. Ari pachokwadi nhare yangu 0775 083 353.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 27, ndotsvagawo murume ane makore 30 – 38 asiri pachirongwa. Andibate pa0715 202 080 ari serious.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 28, ndotsvaga mukadzi ane makore 28 kusvika 30. Anotya Mwari, anoda ngaadibate pa0783 145 255.
Ndiri murume ane makore 47, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 18 kusvika 40. Andifarira ngaandibate pa0733 753 299.
Ndiri mudzimai ane makore 38 nevana 2, ndiri kutsvaga murume wekushamwaridzana naye. Anoda ngaandibate pa0732 444 817.
Makadii paTishamwaridzane? Ndiri kutsvakawo shamwarikadzi, ndiri murume ane makore 42. Zvakawanda tozotaura, ndowanika pa0737 449 032.
Ndiri murume ane makore 40, HIV positive uye ndiri kutsvagawo mukadzi anondidawo, totangira ipapo. Nhare yangu 0775 703 257.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 21 nemwana. Handina chirwere, ndinodawo murume ari pachokwadi asina chirwere ane vana vake 1 kana 2. Nhare yangu 0712 300 032.
Makadii henyu? Ini ndiri murume ane makore 30, ndinotsvaga musikana kana mukadzi wekuroora ari pachokwadi. Andifarira nhamba dzangu 0715 031 449.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 27, ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 23. Ndoda anonamata uye asiri pamushonga, andifarira ngaandibate pa0714 992 570.
Ndine makore 30, ndoda musikana ane makore 25 zvichidzika. Sms pa0712 079 934.
Tishamwaridzane makadii? Ndiri mukomana ane makore 23 uye ndinotsvagawo musikana wekuroora. Ndoda ari serious nemusha. Nhamba dzangu 0716 561 629.
Makadiiko veTishamwaridzane? Ndanzwa nekunyorera ndichisangana nematsotsi ane vakadzi. Ndiri mukadzi ane makore 31 nevana 2, ndinotsvakawo murume asina mukadzi ane hutano seni, ane rudo uye akanaka anogeza anoendawo kubasa. Ngaave nemakore 32 kusvika 45, andifarira ngaandibate pa0774 506 005.
Makadii veKwayedza? Ndishambadzireiwo yangu tsamba, ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa nevana vatatu. Ndotsvaga mudzimai wekuroora ane makore 32 zvichidzika. Andifarira ngaandibate pa0786 495 878.
Ndiri murume ane makore 42 nevana 3, HIV negative uye ndiri mupfupi. Ndoda mukadzi ane makore 32 zvichidzika, ngaave akangwara anoziva Mwari. Nhare yangu 0772 519 694.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 41, ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye. Ndinoda ari kuBindura, Madziva kana kuMt Darwin. Nhare yangu 0784 925 678
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 27. Ndinodawo musikana wekuroora, ane chokwadi asiri pamushonga. Ngaave ane makore 18 – 26. Ndinogara muKwekwe. Anoda ndinobatika panhamba dzinoti 0716 759 664. Ndatenda.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora. Ndiri pamushonga uye ndine vana 2. Andifarira nhare dzangu 0733 621 091 sms.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 37 ekuberekwa, ndine mwana mumwe chete uye ndinotsvagawo murume ane makore 46 kusvika 50. Ndibatsireiwo ndinoshanda, ndiri kuda wekushamwaridza naye. Nhare yangu 0716 031 143.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 ekuberekwa, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore ari pakati pe18 – 23. Anenge andifarirawo ndobatika pa0771 745 961, zvizhinji tozotaura. Ndatenda zvangu.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndiri mupfupi uye ndakasimba. Ndinotsvagawo musikana akavimbika anoda zvekuroorwa. Ngaave anoda zveimba not time waster. Ndinoshanda zvizhinji tinozotaura, andifarira ngaandibate 0715 204 027. Ndinoda asiri pamushonga.
Makadii? Ndiri murume ane makore 32, ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 28 asina mwana, munaku uye asiri pamushonga. Nhare yangu 0771 841 091.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 29, ndinodawo musikana ane makore 20 kusvika 24 akazvipira. Ngaave anoda zvemba asiri pamushonga. Ndinoshanda, anoda ngaandibate pa0773 325 174.
Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana kana ane mwana wake 1. Andifarira ngaandibate pa0785 798 943.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 50, ndinodawo murume wokushamwaridzana naye ane makore 52 zvichikwira.
Ndoda ari pamushonga asi asingaratidzi nokuti ndozvandiri. Ngaave anonamata, zvizhinji tozotaura asi varume vevanhu kwete. Ndakafirwa hangu, andifarira nhamba dzangu 0777 665 158.